नवौं विटी कप सेभेन–ए–साइड फुटबल जारी « KhelkudNews.com
नवौं विटी कप सेभेन–ए–साइड फुटबल जारी
Published On : 20 December, 2014 10:34 pm
बुद्धटोल युवा क्लब पोखरा पुरानो टुँडिखेलको आयोजनामा पुरानो टुँडिखेल मैदान बगरमा जारी नवौं विटी कप सेभेन–ए–साइड फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत शनिबार छ खेल सम्पन्न भएका छन्।
पहिलो खेलमा लेकसाइड क्लबले काजीपोखरी युथ क्लबलाई २–१ ले पराजित ग¥यो।लेकसाइडको लागि दुवै गोल रुपेश केसीले गरेका एि भने काजीपोखरीको लागि एकमात्र गोल विनोद गुरुङले गरेका थिए।
दोस्रो खेलमा एएमपिएम गौरीघाट एफसीले एयरपोर्ट युथ क्लबलाई १–० ले पराजित ग¥यो। एएमपिएमको जीतमा अनिल गुरुङले निर्णायक गोल गरेका थिए।
तेस्रो खेलमा स्वस्तिका नेपालले टुँडिखेल बुल्सलाई टाइब्रेकरमा ३–१ ले पाखा लगायो। निर्धारित समय दुई–दुई गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल टाइब्रेकरमा पुगेको थियो। निर्धारित समयमा स्वस्तिका नेपालको लागि राजु गुरुङ र मिलन गुरुङ तथा टुँडिखेलको तर्फबाट सागर कुँवर र अशोक नेपालीले एक–एक गोल गरेका थिए।
चौथो खेलमा नयाँगल्ली युनाइटेडले गोर्खा गन्सलाई ४–० ले पन्छायो। नयाँगल्लीको लागि बुद्ध लामा, भिक्टोर, इल्मर्स र प्रवीन नेपालीले एक–एक गोल गरेका थिए।
पाँचौं खेलमा पोखरा भ्याली स्पोर्टस् क्लबले अर्चलबोट एफसीलाई ३–० ले पराजित ग¥यो। पोखरा भ्यालीको जीतमा विवेक गुरुङले दुई तथा रोशन हिराचनले एक गोलको योगदान दिएका थिए। छैटौं खेलमा युवाईभीसी रिभानले मारानाथा चर्चलाई १–० ले हरायो। रिभानको लागि किरण गुरुङले निर्णायक गोल गरेका थिए। आइतबार पाँच खेल हुने राजु गुरुङले जानकारी दिए।
पुस १० गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा ३५ टीमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा विजेता टीमलाई नगद ७५ हजार पाँच सय ५५ तथा उपविजेता टीमलाई नगद ४५ हजार पाँच सय ५५, शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ।
यसैबीच नेपाल सेभेन–ए–साइड फुटबल महासङ्घका अध्यक्ष नवीन पुनले क्लबको लागि १० थान बल दिने घोषणा गरेको क्लबका सहसचिव एवं खेल संयोजक प्रदीपकुमार राई ‘दाह्रासिंह’ ले जानकारी दिए।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धा स्व. गणेशमान सिंहको स्मृतिमा ‘वीर गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ
आईडब्लुएफएन कराँते डो सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेको छ। भारतको हरियाणा पानी पथ राज्यमा गत
मच्छिन्द्र यस वर्षको लिग च्याम्पियन
सानमिगेल मच्छिन्द्र क्लबले कतार एयरवेज सहिद स्मारक लिग फुटबलको उपाधि जित्न सफल भएको छ ।
सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्क र क्लब दे नोभो प्रा.लि.बिच सम्झौता
सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्क र कालिका नगर बुटवल, रुपन्देही स्थित क्लब दे नोभो प्रा.लि. बिच विभिन्न